အမေ့သား: August 2012
မင်းကချစ်တဲ့မင်းရဲ့သား
ငါကချစ်တဲ့ငါရဲ့သမီး
ငါတို့ ရဲ့ ရင်ခွင်စီ
ထွေးပွေ့ ကြိုချင်လွန်းလို့ ပါ။
Posted by အမေ့သား at Thursday, August 30, 2012 1 comment: Links to this post
အမေထုပ်ပေးလိုက်သော အထုပ်ကို နောက်ကျောတွင်ထိုးပြီး အင်္ကျီနဲ့ ကွယ်ကာ အဖေမသိအောင်
ခပ်သုတ်သုတ်လေးအိမ်မှ ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့ သည်။ အမေမှာသော စကားများကိုလည်း အဆက်မပြတ်ရွတ်လာခဲ့မိသည်၊မှောင်ရီစအချိန်တွင်တဖက်လမ်းသို့ ခပ်သွက်သွက်သွားရင်း
ဘယ်သူမှမမြင်အောင်ခေါင်းကိုငုံ့ ပြီးရှေ့သို့ သာမဲပြီးလျှောက်လာခဲ့ မိသည်။ နောက်ကျောမှာ ပါလာသောအထုပ်ကလေးကိုလည်းခဏခဏစမ်းမိသည်။အမေပြောသောအိမ်သို့ ရောက်လေပြီ။
အန်တီတုတ် ! အမေကပြောတယ်..(၁၅၀) တော့ပေးပါတဲ့ ၊မကြာပါဖူးတဲ့......
မေ့မှာစိုးလို့ သာ ပြောလိုက်ရခြင်းပင် ဘာမှန်းမသိသေး
အန်တီတုတ် အထုပ်ဖြေကြည့်တော့ အမေ ဟိုတလောကမှ ဝယ်ထားသော ထမိန်အသစ်ကလေး အထပ်ဆင်တောင် မတပ်ရသေး. ကျွန်တော်သိလိုက်ပြီ၊သူငယ်ချင်းတွေပြောပြောနေသော ..သွားပေါင်တယ်... အပေါင်ခံတယ်ဆိုတာ! အခုကျွန်တော်အပေါင်ခံသောအိမ်ကိုရောက်နေသည်၊ နင့်အမေကိုပြောလိုက် သူ့ မို့ လို့(၁၅၀) ပေးတာလို့ဟုတ်.... တလုံးသာပြောပြီး အန်တီတုတ်ပေးလိုက်သောပိုက်ဆံ(၁၅၀)ကိုလက်ထဲကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ပြီးအိမ်သို့ တန်းပြေးလာခဲ့ သည်။
အမေ ရော့ (၁၅၀) .. အမေက ပိုက်ဆံကိုယူပြီး အကြွေ (၅)ကျပ် ကျွန်တော့်ကိုပေးသည်။
သား မုန့်ဝယ်စားတဲ့ ......
ပျော်သလိုလို ဝမ်းနည်းသလိုလိုနဲ့ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် ဘဝတွင်ပထမဦးဆုံးအပေါင်ခံသောအိမ်တွင် ပစ္စည်းပေါင်ဖူးခဲ့ လေပြီ။
Posted by အမေ့သား at Saturday, August 18, 2012 1 comment: Links to this post
Posted by အမေ့သား at Friday, August 17, 2012 1 comment: Links to this post
Posted by အမေ့သား at Saturday, August 11, 2012 1 comment: Links to this post